उपेन्द्रले महन्थलाई सुनाए ओलीसँग सहकार्य गर्दाको तीताे अनुभव, बोलेनन् राजेन्द्र महतो
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई संसदीय दलको विधान पारित गरी नेता चुन्न सकस परेको छ । नयाँ सत्ता समीकरणलाई लिएर बढेको ध्रुवीकरणमाझ आज बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । आजको बैठकले दलको विधान पारित गर्ने र सोहीअनुसार दलको नयाँ नेता चयन गर्ने तयारी थियो ।
नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले पूर्वनिर्धारित एजेण्डामाथि छलफल भएको बताए । ‘दलको विधान र नेताबारे छलफल गरियो तर सहमति हुन सकेन, अर्को बैठकमा सहमति होला’, उनले शिलापत्रसँग भने । उनले राजनीतिक घटनाक्रमबारे बहस दलको बैठकमा नभएर ५ चैतमा बस्ने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा हुने बताए ।
जसपाकै अर्का एक सांसदले भने आजको बैठकमा पूर्वनिर्धारित एजेण्डाभन्दा बढी छलफल पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र नयाँ समीकरणमा पार्टीको भूमिकाबारे भएको बताए । आज पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेता अशोक राई, महेन्द्र राय यादवलगायतले बोले । तर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो आज मौन बसे ।
बोल्ने क्रममा नेताहरूले एकआपसमा ‘घोचपेच’ गरेका ती सांसदले बताए । अध्यक्ष ठाकुरले नयाँ सत्ता समीकरणमा एमालेलाई सघाउन सकिने धारणा राखेका थिए । ठाकुरको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सांसदले भने, ‘हाम्रा माग पूरा गर्न जुन दल सहमत हुन्छ, हामीले उसैसँग सहकार्य गर्ने हो । सबै साथीहरूको राय त्यही छ । केपी ओलीले माग पूरा गर्ने भए भने उनैलाई सघाउन पनि सकिन्छ ।’ सरकारसँग वार्ता गर्न यसअघि ठाकुरले एकलौटी निर्णयका आधारमा कार्यदल बनाएको भन्दै पार्टीभित्र उनको आलोचना भएको थियो ।
अध्यक्ष यादवले ओलीले विगतमा पनि पटक–पटक झुक्याएको दृष्टान्त पेस गरेका थिए । उनले ओलीको भर नहुने भन्दै एमालेबाहेकको विकल्पमाथि छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका सांसद प्रमिलाकुमारी यादवले शिलापत्रलाई जानकारी दिइन् । ‘ओली कस्ता छन्, हामीलाई थाहा छ’, अध्यक्ष यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद प्रमिलाकुमारीले भनिन्, ‘सहमति गरेर ओलीले पटक–पटक झुक्याएका छन् । सहमति गर्नु ठूलो कुरा होइन, कार्यान्वयन ठूलो कुरा हो । कार्यान्वयनका हकमा ओलीजति जाली नेता अरु कोही छैनन् । उनीसित कुनै हालतमा सहमति गर्न हुँदैन ।’
तत्कालीन संघीय समाजवादी फाेरमका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका यादवलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सोध्दै नसोधी स्वास्थ्यबाट कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिएका थिए । उपप्रधानमन्त्रीकाे समेत जिम्मेवारीमा रहेका यादव भारत भ्रमणमा गएका बेला ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । यही असन्तुष्टिले पछि यादवले राजीनामा दिएका थिए ।
उनले निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलाई छुटाउने कुरा कानुनी भएको र ओलीबाहेक जुनै प्रधानमन्त्रीले पनि छुटाउन सक्ने बताए । ‘ओलीले नै रेशम चौधरीलाई छुटाउन नदिएका हुन् । अहिले उनलाई अप्ठेरो परेकाले रेशमलाई छाड्ने भनेर फेरि जाल हान्दैछन्’, यादवले भने ।
संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ओली संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीता र धर्म निरपेक्षताको विरोधी भएको आरोप लगाए । ‘केपी ओलीले हाम्रा कुनै माग पूरा गरिदेलान् भनेर पत्याउन सकिँदैन’, बैठकमा भट्टराईले भने ।
वरिष्ठ नेता महेन्द्र राय यादवले नयाँ समीकरणका लागि पार्टी निर्णायक भूमिकामा भएकाले कसैसँग पनि उधारो सहमति गर्न नहुने बताएका थिए ।
पार्टीको हितभन्दा बाहिर गएर कोही कसैसँग सम्झौता नहुने भन्दै अध्यक्ष ठाकुरले नेताहरूलाई विश्वस्त पार्न खोजेका थिए । उनले माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससँग पनि छलफल गर्न लागिएको जानकारी बैठकमा गराएका थिए ।
सांसद रामसहाय यादवले पार्टीको आगामी भूमिकालाई लिएर शीर्ष तहमा धेरथोर मतभेद देखिएको बताए । सांसद प्रमिलाकुमारी यादवले एमालेलाई सघाउन कसैले बलजफ्ती गर्न खोेजे त्यसले पार्टीमा ठूलो समस्या निम्त्याउने बताइन् । बैठकमा आज उनले पनि बाेलेकी थिइन् ।
दलको नेता छान्न सकस
आजको बैठकको खास एजेण्डा संसदीय दलको विधान र दलको नेता चयन गर्ने थियो । तर, बैठकले न विधान नै पारित गर्न सक्यो, न दलको नेतामा सहमति जुटाउन नै । पार्टी एकता गर्दा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता बनाउने अनौपचारिक सहमति भएको बताइएको थियो । तर, अहिले पूर्व संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरूले महतोलाई दलको नेता स्वीकार्न मानेका छैनन् ।
जसपाका एक सांसदका अनुसार महतो अध्यक्ष ठाकुरसँग मिलेर एमालेलाई सघाउन सक्रिय भएको भन्दै अध्यक्ष यादव, भट्टराईलगायत नेता असन्तुष्ट छन् । ‘उहाँ (राजेन्द्र महतो)लाई संसदीय दलको नेता बनाउने कुनै पूर्वसहमति छैन’, सांसद प्रमिलाकुमारीले भनिन्, ‘व्यापक छलफल र सहमतिका आधारमा नेता चुन्ने हो, जो पनि हुन सक्छ ।’
ज्येष्ठताका आधारमा अहिले जसपा संसदीय दलका नेता महन्थ ठाकुर छन् । सर्वसम्मत दलको नेता हुन ठाकुरसहित उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो आकांक्षी छन् ।
आन्तरिक विवादका कारण संसदीय दलको नेता चुन्न नसकेकाले अब चुनाव हुने सम्भावना बढेको सांसद् डा. सूर्यनारायण यादवले बताए । यद्यपि, सहमतिको प्रयास जारी रहने उनकाे भनाइ छ । नयाँ सत्ता समीकरणमा जसपा निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएकाे छ । तर, शीर्ष नेताहरूबीचको विवादले जसपा आफैं अनिर्णित छ । यसअघि अस्ति बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकमै विधान र दलको नेता चयनको एजेण्डा भए पनि शुक्रबार मात्र यसमाथि छलफल सुरु भएको छ । सांसद् डा. यादवले भने, ‘सहमतिको प्रयास भएकै हो, त्याे सफल नभएकाले अब चुनावकाे सम्भावना बढेकाे छ ।’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २८, २०७७, १८:१४:००